ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၃) - Myanmar Network
ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၃)
Posted by Language Republic on November 18, 2015 at 10:52 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
တစ်စုံတစ်ယောက်၏ မျက်စိအမြင်ပျက်စီးအောင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုလုပ်သော အရာဟု မထင်လိုက်ပါနှင့်။ Blinding သည် အကောင်းဘက်မြင်သော ဝေါဟာရဖြစ်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အလွန်ထူးချွန်သော၊ ပြောင်မြောက်သော (သို့) လက်ဖျားခါလောက်သော ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ - That tackle from the Spanish player was blinding. (စပိန်ကစားသမား ဘောလုံးကို ၀င်လုလိုက်တဲ့ပုံက အရမ်းကို ပြောင်မြောက်တာပဲ။)
အမှားတစ်ခုခုကြောင့် (သို့) ရိုင်းစိုင်းမှုတစ်ခုခုကြောင့် ဒေါသထွက်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းကို ဖော်ညွှန်းပါ သည်။ အနည်းငယ် ခေတ်နောက်ကျသော အဓိပ္ပါယ်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာ (သို့) မတရားသဖြင့် ပြုမူခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။)
ဥပမာ - When my girlfriend saw the mess I’d made, she lost the plot. (ကျွန်တော် ရှုပ်ဖွထားတာတွေမြင်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ချစ်သူက ဒေါသထွက်ပြီး စိတ်ဆိုးသွားပါတယ်။)
Cheers ကတော့ တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာသုံးသည့် အဓိပ္ပါယ်နှင့် သိပ်မတူပါ။ မိတ်ဆွေတချို့နှင့် အရက် သောက်ပြီး ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတော့ "အောင်ပွဲခံခြင်း" (celebrations)ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါသေးသည်။ သို့သော် ဗြိတိသျှ ဗန်းစကား၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ "ကျေးဇူး"သို့ "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ - Cheers for getting me that drink, Steve. (အရက်ယူပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲ Steve ရာ။)
Permalink Reply by thanthanhtay on November 20, 2015 at 15:23